Iphone 6plusအရောင်းအလဲ အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Zwe Man
Iphone 6plus 64gb.
All acc and box .
လူတကာငေးမဲ့ မဟူရာ gray
ငွေ စင်ဆို 34 နဲ့ပေးပစ်မယ်.
အမည်: Iphone 6plusအရောင်းအလဲ